मेरो प्राथमिकता भनेको हाम्रो टोखा, राम्रो टोखा बनाउँने नै होः उपमेयर उम्मेदवार थापा (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २५ गते १०:१९ मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा टोखा नगरपालिका कि नेपाली कांग्रेस कि मेयर उम्मेदवार रजनी थापासंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
चुनाबी माहोलमा यहाँहरु लागिरहँदा नगरबासीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाईरहनु भएको छ ?
सर्बप्रथम त घर–दैलो भनेको व्यक्ति–व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाउँनु सबैभन्दा पहिला चुनाबी माहोल भन्दा पनि त्यो गौरवको कुरा हो ।
जबसम्म घर–घर जादैनौ, व्यक्ति–व्यक्ति भेट्दैनौ, समाज–समाजलाई भेट्दैनौ हामीलाई त्यहाको समस्या बारे थाहा हुँदैन ।
अहिलेको घर दैलोको कार्यक्रममा कत्ति वटा घरको नाम मात्र सुनेको, कत्ति वटा घरमा चिनाजानी भएको र त्यहा हामी पुग्दा चिनाजानी भएको ठाउँमा चाहि किन आईरहेको यहाँ ? अर्को ठाउँमा भोट माग्न जाउँ, हामी त आफ्नै हो भन्या, जस्तो सन्दर्भ र नाम सुनेको ठाउँमा पनि तपाईलाई हेर्न मन थियो कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले आजसम्म पोजेटिभ फिलिङ, पोजेटिभ वयलकम, मुख्य कुरा सबै जनाले ए तिमि पो हौ रजनि भनेको ? भनेर राम्रो प्रतिक्रिया दिईरहनु भएको छ ।
नगरबासीहरुको घर–दैलोमा पुग्दा त्यहा भित्रको समस्या के देख्नु भयो ?
अहिलेको सन्दर्भमा टोखा नगरपालिका भर्खरै नगरपालिका भइरहेको अवस्था हो । भनेपछि जुन कुरा भर्खर बनेको हुन्छ त्यहा धेरै टुट–फुट हुन्छ । यी टुट–फुट कुरालाई नयाँ र राम्रो बनाउँनका लागि नै उम्मेदवारी दिईरहेको भएर त्यहा भित्र नयाँ कुराहरु संकलन गरिरहेको छु । त्यसमा त देश कै विषय बस्तु र स्थानिय विषय बस्तु उस्तै नै हो । मुख्य कुरा त बाटो नै हो, ढल नै हो, शिक्षा नै हो र समावेसी कै कुराहरु हो । मेरो टोखा नगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि यहि नै हो । हाम्रो अहिले नुवाकोट छुने हाईवय नि बन्दै छ । भर्खर–भर्खर नगरपालिका भएको हुनाले भर्खर बजेट रिलिज भएको कारणले त्यहा ढल हाल्ने कुराहरु भईरहेको छ, बाटो बिग्रेको अवस्था छ, पानि परिरहेको छ । अहिले त बाटोमा पनि धान रोप्यो भने उम्रने अवस्थामा छ ।
नगरको उपमेयरमा तपाई महिला उम्मेदवार, त्यसमा पनि उमेरको हिसाबले कान्छो उमेरको मध्यबाट एक हुनुहुन्छ, यसमा अरु उम्मेदवार जो अन्य दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्दै चुनाबी माहोलको मैदानमा छन् र त्यो भिडभाडमा यहाँको उम्मेदवारी किन र के का लागि ?
नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारहरुबाट सबै भन्दा कम उमेरको उम्मेदवार म नै होला र मेरो उम्मेदवारी किन ? भन्दा खेरी, जहाँ जुन कुराको आवश्यकता हुन्छ, त्यहा त्यही कुरा पुरा गरिन्छ । जहासम्म मलाई लाग्छ टोखा नगरपालिकालाई मेरो आवश्यकता थियो । त्यसैले मेरो उम्मेदवारी रहेको छ । म व्यक्ति भएर मेरो आवश्यकता हैन मेरो सोच, मेरो मिसन, मेरो भिजन र मैले कार्यन्वयन गर्ने कुराहरुका लागि आवश्यकता हो ।
मेलै टोखा नगरपालिकामा ठुलो कुरा गर्ने भन्दा पनि पहिला सानो अनी ठुलो कुरा गर्छु ।
पहिलो त हाम्रो बाटोको नै समस्या छ किनभने हाम्रो झोर भनेको अब विकास हुने प्रक्रियामा छ । टोखा भनेको ऐतिहासिक क्षेत्र हो तर त्यहाको बाटो–घाटोहरु अहिलेसम्म बनिएका छैनन् । त्यस्तै धापासिको सन्दर्भमा, गोंगबुको सन्दर्भमा मुख्य समस्या भनेको अहिले हाम्रो रोड नै छ, जस्तो १० नम्वर क्षेत्र गोंगबु भयो, गणेशस्थानबाट ग्रिल्याण्ड जाने बाटो भयो, त्यस पछि झोरको सन्दर्भमा, टोखामा ग्राण्डिबाट टोखा भुतखेलसम्म राम्रो छ किनकी त्यहा गा्रण्डिको बाटो भएर, त्यस पछि टोखा भुतखेलबाट चण्डेश्वरी जान्छौ । त्यो बाटो बनेको छैन । त्यस्ते सन्दर्भमा बसुन्धराबाट देउराली जनतासम्मको बाटो विग्रिएको छ । यसरी समस्याहरुलाई एक–एक गरेर हेर्ने हो भने बाटो नै छ ।
हिजोको दिनमा सरकारले ढल हालेको थियो । हिजो बस्ति सानो थियो र त्यहि ढलले काम गरेको थियो, आज बस्ति बढि नै सक्यो । भने पछि ढललाई पनि व्यबस्थापन गर्नु पर्ने छ । त्यसमा पनि ढलहरु ठाउँ–ठाउँमा फुुटिरहेको छ । त्यसले बाटो पनि अबरोध भईरहेको छ ।
अर्को कुरा शिक्षा नै हो । भनिन्छ एउटा महिला शिक्षित भईन् भने घर शिक्षित हुन्छ, समाज शिक्षित हुन्छ । अहिले सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पढ्नेको संख्या कम नै छ । हाम्रोमा ३, ४ वटा सरकारी स्कुल रहेको छ । सरकारी स्कुलमा पनि धेरै कुराहरु सुधार्नु पर्ने छ ताकि त्यहाको जनताले सहज तरिकाले पढ्न पाउनु पर्छ । सरकारले दिएको मौलिक हक त उसले पाउनु पर्यो नि त । शिक्षाबाट बञ्चित हुनु भएन नी ।
अबको मेरो प्राथमिकता भनेको हाम्रो टोखा, राम्रो टोखा बनाउँने हो ।
नेपाली कांग्रेस टोखा नगरपालिका कि उपमेयर उम्मेदवार रजनी थापासंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः